01/05/2012: Namaky lay ny Kianjan'ny 13 May ny zanak'i Dada (+vidéos) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
01/05/2012: Namaky lay ny Kianjan'ny 13 May ny zanak'i Dada (+vidéos)
LIVE MAGRO - KIANJAN'NY 13 MAY
15H34 : Miomana ny hihazo ny kianjan'ny 13 Mai ny vahoaka, rehefa avy nihaino ny toromarika tao amin'ny Kianja. Ny filoha lefitry ny CST, Hanitra Razafimanantsoa, no mitarika. Ny filohan'ny Ct Mamy Rakotoarivelo dia tojo tsy fahasalamana. Ary raha ny vaovao voaray, dia voaantso eny amin'ny Cour Criminelle ordinaire ny filohan'ny CT ny 18 Mai ho avy izao.
Sary fivoahana teny amin'ny Kianjan'ny 13 May
15H50 : Tonga eo amin'ny Kianjan'ny 13 Mai ireo mpitolona, mbola tsy misy mpitandro ny filaminana hatreto.
16H00 : Efa nipody niverina any amin'ny Magro ny mpitolona. Nilamina tsara ny fihetsiketsehana. Tsy nisy zavatra simba na fandrobàna. Be ny olona nanampy teny an-dàlana. Fampisehoan-kery voalohany izay.
Iza no mpanakorontana ???
Voaporofo androany fa ny EMMOREG no mpanakorontana fa tsy ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna. Tsy nisy fioharam-pefy na dia bitika aza nandritra ny fotoana nivoahan'ny mpiara-dia amin'ny Filoha RAVALOMANANA teny amin'ny Kianjan'ny 13 May. Afaka naneho hevitra tamim-pilaminana tamin'ireo rehetra nifanojo taminy izy ireo ary santatra ihany izany satria tsy hijanona intsony ny tolona. Efa niarahan'ny rehetra niaiky fa tsy ampy ny mitaky ao anatin'ny Magro fa ilaina ny mizara izany amin'ny mpiara-belona rehetra sady maneho fahasahiana mba ho fanentanana ny mpiara-belona.
Tsy fotoanan'ny fanaovana "ariary zato am-pandriana" araka ny fitenena intsony izao fa andron'ny fandraisana andraikitra hanavotana ny Firenena. Rahampitso ary dia hanotrona ireo maherifon'ny raharaha FIGN eny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ny vahoaka. Ankoatran'ny maha-fotoana ifanomezan'ny rehetra anohizana ny fivoahan'ny tolona dia endrika fitakiana ny fampiharana ny tondro zotra io hetsika io ary ho fanehoana amin'izao tontolo izao fa afaka mandray andraikitra ny Malagasy rehefa tsy misy vonona ny hanampy azy amin'ny famonjena ny Tanindrazany. Hivadika ho hery ny fahasahiana nivoaka ny Kianja'ny Finoana androany taorian'ny famoretana nahazo ny zanak'i Dada tamin'ny sabotsy teo ary antso ho an'ny mpiara-belona rehetra izany satria iaraha-manana ny Firenena.